Cali Seeko: ” Dowladda Caburinta dhanka Doorashada ha deyso” | Baydhabo Online
Cali Seeko: ” Dowladda Caburinta dhanka Doorashada ha deyso”
Siyaasiga Cali Maxamuud Faarax ( Cali Seeko) oo ka mid ah Siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo Shabelle la hadlay ayaa dowladda Federaalka Soomaaliya kaga digay in ay is hortaag ku sameyso Shirarka Beelaha Soomaaliyeed ay ku yeelanayaan Hoteelada Muqdisho.
Cali Seeko ayaa xusay in Waqti yar ay ka harsantahay Doorashada Dalka islamarkaana Oday dhaqameedyada Soomaaliyeed ay kaga tashanayaan Masiirka Dalka loona baahan yahay in aan laga hor istaagin howlahooda.
Waxaana Cali Seeko uu wax laga xumaado ku tilmaamay in Ciidanka Dowladda Soomaaliya loo adeegsado Dan gaar ah oo Quseeya Siyaasadda Soomaaliya.
Isagoo hadalkiisa sii wata Siyaasiga Cali Seeko ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in Waqtigaan oo kale Sanadkii 2012 dalka laga dareemayay ololaha Doorasho balse xilligaan ay jirto Caburin dhanka Doorashada ah sida uu hadalka u dhigay.
“ Beelaha Soomaaliyeed xaq ayey u leeyihiin in ay shirar yeeshaan oo aayahooda ay kaga arrinsanayaan” ayuu yiri Cali Seeko.
Dhawaan ayey ahayd markii Ciidamada dowladda Federaalka Soomaaliya is hortaag ku sameeyeen kulan mid ka mid ah Beelaha Soomaaliyeed ay ku yeelan rabtay Hoteel Makka Al Mukarrama.